Hafatry ny Advento 2010 – FJKM Ambavahadimitafo Hafatry ny Advento 2010 |
Hafatry ny Advento 2010
A la une.Fankalazana.Fiainana kristianina.Vaovao
Mandia vanim-potoana vaovao ny Fiangonana Kristiana manerana izao tontolo izao dia ny Alahady Voalohany amin’ny Advento sady miditra amin’ny Taom-Piangonana vaovao ihany koa anio 28 Novambra! Miarahaba antsika mpianakavin’ny Finoana rehetra noho izany sady maniry soa ho anareo. Heveriko fa ny fanazavana ara-tSoratra Masina mikasika ny Advento no fanomezana tsara indrindra azo atolotra anao mifanandrify amin’izao vanim-potoana lehibe ho an’ny finoantsika kristianina izao. Ara-bakiteny, ny Advento na ny « avent » dia tsy inona fa aloha na ireo alahady mialoha ny Krismasy. Miisa efatra hatrany izy ireo ao anatin’ny taona ary ahitana andro miisa 27 ka isan’andro dia tokony hiaina izany advento izany isika fa izay atolotra eto dia tari-dalana ara-tSoratra Masina fohy manoloana ireo perikopa FJKM efatra ao anatin’ny Alahady efatra misesy.
Advento I : 28 Novambra 2010
Advento II : 5 Desambra 2010
Advento III : 12 Desambra 2010
Advento IV : 19 Desambra 2010